Mihevitra Ny Handràra Tanteraka Ny Fanalànjaza i Angolà, Manohitra Izany Ireo Vehivavy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Avrily 2017 4:45 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Ελληνικά, Français, Português
Vehivavy an-jatony tany Loandà nanao hetsika manohitra ny fanamelohana ny fanalànjaza, Sabotsy 18 Martsa. Sary : Ondjango Feminista/Facebook, navoaka rehefa nahazoana alàlana.
Vehivavy an-jatony no nanohitra ilay fehezandalàna famaizana vaovao any Loandà, izay mandràra tanteraka ny fanalànjaza any Angolà — na azo avy amin'ny fanolanana aza– ary folo taona an-tranomaizina no sazin'izay vehivavy manàla zaza.
Raha toa ka ekena io dika vaovaon'ilay fehezandalàna io, dia hilahatra amin'ireo firenena enina erantany : Malta, Vatikàna, Repoblika Dominikàna, Nikaragoà, El Salvador ary i Shilia izay mandràra tanteraka ny fanalànjaza, na inona na inona antony, i Angolà. Etsy andanin'izany kosa i Mozambika, tamin'ny 2014, dia niaraka tamin'i Cap Vert, Afrika Atsimo, ary i Tonizia izay hany firenena tsy manisy fepetra amin'ny fanalànjaza, tamin'ny nanavaozany ny lalànany sy ny nanekeny ny fanalànjaza rehefa misy fangatahana.
Tao amin'ny haino aman-jery sosialy no nikarakaràna ilay hetsika taorian'ny naneken'ny Antenimieram-pirenena ilay dika savaranonando hasolo ilay lalàna mametra ny fanalànjaza efa nanan-kery hatramin'ny 1886.
Ivelan'ny Parlemanta dia ny fiangonana Katolika no iray amin'ireo mpankasitraka matanjaka ilay lalàna vaovao. “Tsy maintsy arovana amin'ny fotoana sy amin'ny sehatra rehetra ny aina” hoy ilay mpitondra tenin'ny Kaonferansy Episkopalin'i Angolà sy São Tomé (CEAST), José Manuel Imbamba.
Ilay lalàna tranainy momba ny fanalànjaza, nolovaina tamin'ny lalànan'ireo Portiogey mpanjanaka, dia efa nandràra ny fanapahana ny fitondràna vohoka, saingy nanavaka ny tranganà fanolanana, ny tsy fahatomombanan'ny zaza ao am-bohoka, na loza mananontanona ny ain-dreniny. Ilay dika momba ny fehezandalàna famaizana vaovao amin'izao fotoana izao dia mandràra tanteraka ny fanalànjaza, ary sazy an-tranomaizina efatra ka hatramin'ny folo taona no ho an'izay vehivavy manala zaza, ho solon'ilay sazy taloha roa ka hatramin'ny valo taona.
Mety amin'ny fivorina manaraka azon'ny be sy ny maro atrehina amin'ny 23 Martsa no hanaovana ny fifidianana farany, na nangataka fanemorana aza ireo mpikambana sasany ao amin'ny parlemanta, taorian'ireo hetsi-panoherana.
Raha vao folaka ny andro dia nanao diabe, avy any amin'ny fasam-bahinin'i Santana ho any Largo das Heroinas, any afovoan'ny faritr'i Loandà ireo mpanao fihetsiketsehana sady milanja sorabaventy misy ireo teny faneva ” Tsy ilaina ny vatapaty, tsy ilaina ny fonja : malalaka aho” sy ny ” Mahafaty ny fanamelohana”.
Nanampy tamin'ny fikarakarana ny diabe sy fandefasana lahatsary marobe tao amin'ny Facebook nandritra ny hetsika ny fikambanana Ondjango Feminista.
Vehivavy maro ihany koa no nandray fitenenana tamin'ny fiafaran'ilay diabe :
Niteraka fanehoankevitra be dia be tao amin'ny haino aman-jery sosialy nandritra ny herinandro ilay lohahevitra, isan'izany ity an'i Isabel dos Santos, ilay zanaka vavin'ny filoha Angole ity :
Tao amin'ny Instagram, nandefa ny hafatra iray avy tamin'i Ana Paula Godinho, mpislovava iray amin'ireo mpikarakara ilay diabe izy :
Ry vehivavy angole malala, andro manjombona ho ahy androany. Miangavy anareo aho hijery izay nekena tao amin'ny Antenimieran'ny Repoblika mikasika ilay fehezandalàna famaizana vaovao momba ny fanalànjaza. Mialoha ny hanehoana hevitra, dia manao antso amin'ireo solombavambahoaka rehetra aho, ny ao amin'ny fitondrana sy ny mpanohitra. Jereo amin'ny masonareo ilay nekena. Tsarovy fa ny fehezandalàna famaizana tamin'ny 1886 no nety kokoa ho an'ny vehivavy, indrindra amin'ny trangana fanolanana sy ny tsy fahatomombanan'ny zaza ao am-bohoka (fanalànjaza tsy maintsy atao rehefa hita fa marary ilay zaza ao am-bohoka) . Hiverin-dàlana ve isika ankehitriny ? Diniho tsara, mialohan'ny hidinan'ireo vehivavy an-dàlambe, tahaka izay niseho tany taloha, nandoroan-dry zareo ny tatinonony. Amin'ity indray mitoraka ity tsy maintsy hametraka ny fehikibon'ny fahadiovam-pitondrantena ry zareo.
Raha toa ka misy vehivavy voaolana ka bevohoka dia tsy maintsy hanan-janaka izy, ka raha aatony ny fitondrany vohoka, fara-fahakeliny, dimy taona an-tranomaizina no saziny. Amin'ny farany izany dia indroa voaolana izy : ny nataon'ny mpanolana no voalohany ary avy eo ny nataon'ny lalàna. Ry vehivavy, ry solombavambahoaka, nariantsika ireo zavabta marobe. Miverina any amin'ny 200 taona lasa isika. Mahatsiaro tena ho afa-baraka aho amin'ny maha-vehivavy ahy. Hiverenako io resaka io, rehefa lasa io fahatairana io. Mirary herinandro sambatra ho anareo aho. Mirary soa indrindra.
Notohanan'ny ankamaroan'ny antoko eo amin'ny fitondrana, Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), ilay lalàna savaranonando. Ny solontenany rehetra dia nifidy ny handany izany. 36 ny isan'ny mpanohitra tsy nilaza ny heviny ary tsy nisy ny nanohitra.
Naneho hevitra momba ilay diabe ihany koa i Zenaida Machado, mpikaroka iray miaraka amin'ny Human Right Watch ( fikambanana miaro ny zon'olombelona sy manaja ny fanambaràna ny zon'olombelona Manerantany) ho an'i Angola sy Mozambika :
Diabe momba ny fanalànjaza any Loandà. Tsy misy tatitra momba tsy fetezan-javatra. Manao ny asany amin'ny fiarovana ilay diabe ny mpitandro filaminana.
Aline Frazão, mpihira sady mpamokatra hira any Angolà, dia nanao antso manohitra ilay fehezandalàna famaizana vaovao, tamin'ny fanamafisana fa laika ny fanjakana ary tsy tokony hifototra aminà resaka fivavahana ny lalànany :
Tsarovy ny fototra : Laika ny fanjakana. Tsy natao hitovy fototra amin'ny an'ireo karazana antokom-pivavahana ny lalàna. Tahaka izany ihany koa, ny tany tàn-dalàna dia tsy maintsy manome antoka ny fahalalahan'ny antokom-pivavahana, tsy maintsy miaro ny safidin'ireo izay tsy mivavaka ihany koa izy. Indrindra rehefa ny zon'ny vehivavy no resahana, misy fifangaroana lehibe eo amin'ny lalànan'ny baiboly sy ny lalànan'ny fanjakana.
Ny tena loza dia rehefa mihevitra ny fanjakana sy ny fiangonana fa azy ny tenantsika. Ho gaga ianareo rehefa manome lamosina antsika izy ireo. Mazava be fa raha tsy miaraka manao izao diabe izao isika dia tsy ho azontsika mihitsy ny fitoviana sy ny rariny. Raha tsy mampiakatra ny feontsika isika, dia tsy hisy hanao izany ho antsika. Fotoana hikiakiahàna izao.
Mauro Steinway, tanora Mozambikana mpanakanto dia nihevitra ny fanohanan'ny Fiangonana Katolika ho ” ady ataony amin'ny vehivavy” :
Any Angolà, manao ny ataony foana ny fiangonana katolika, amin'ny fiasàny mangina amin'ny fanahin'ireo olona any amin'ny tany an-dàlam-pandrosoana mba hanosehany ny fandaharam-potoana Kristianany sy ny maha-renin'ny mahantra azy. Natao toy ny ara-dalàna ny tena ady amin'ny vehivavy. Miteny izay tokony hataon'ny vehivavy amin'ny tenany ireo lehilahy.
Ny fiangonana katolika no tsy maintsy reny mpanohana lehibe indrindra ho an'ny mahantra. Ireo vehivavy manambola dia ho any ivelany na hanome tsolotra ireo sampan-raharahan'ny fahasalamana mba ho afaka manàla zaza, raha ny mahantra kosa ho faty raha manandrana manao izany.
Naneho firaisankina tamin'ilay hetsika ny A FEMAFRO, fikambanana Portiogey iray tantànin'ireo vehivavy miaro ny zon'ireo vehivavy Afrikàna mainty sy ireo vehivavy taranakà afrikàna, :
Fiombonana amin'ny adin'ireo angole mpiara-miasa aminay ao amin'ny Ondjango Feminista, amin'izao fotoan-tsarotra haneken'ny governemantany ny fanamelohana ny fanalàna zaza saika amin'ny tranga rehetra izao. Ady atao amin'ny zon'ny vehivavy sy ho loza mananontanona ny aina sy ny fahasalaman'ny maro izao fanapahankevitra izao, indrindra ho an'ny mahantra. .
Amerika Avaratra 16 ora izay